Intsha yakoBulawayo Ihlangana Ihlaziya Uhlelo lweZimAsset
Mbimbitho 18, 2014
BULAWAYO — Intsha yakoBulawayo ithi ayilalo ithemba lokuthi uhlelo lwe ZimAsset lulakho ukuvuselela amankampani akoBulawayo labasakhulayo bathole imisebenzi ngoba kusadingeka ukuthi kuqedwe ukungathembeki okugcwele phakathi kweziphathamandla zikahulumende ikakhulu ezebandla leZanu PF.
Bexoxisana emhlanganweni wokukhulumisana lamabandla ezombusazwe ophathwe eNkulumane lamhla, abasakhulayo bathi indlela ibandla leZanu PF elizaphatha ngayo labo abangathembakalanga yiyo ezatshengisa obala ukuthi lelibandla lizimisele yini ukuthi uhlelo lweZimbabwe Agenda for Socio- sustainable economic transformation iZimAsset, luguqule inotho yakuleli.
Ekhuluma kulumhlangano, osakhulayo uMnumzana Hector Chikowore, uthi ugwalo lweZimAsset lutshengisa ukuthi imali yokuqhuba inhlelo zokuvuselela inotho kumele ivele kwamanye amazwe kodwa ilizwe alilabudlelwano obuhle lamazwe alemali.
Uthi phezu kwalokho imithetho yokusa inotho ebantwini abansundu, ukungathembeki kweziphathamandla ezikuhulumende kanye lokungahloniphi impahla yabantu kulokhu kusenza ukuthi amazwe alemali athandabuze ukuyiletha kuleli.
Umnumzana Khumbulani Mpofu, owebandla leZanu PF, uthi ibandla lakhe lizimisele ukuguqula impilo zabantu kodwa abanye bayasala bephethe ize ngenxa yokuhambela emuva besithi abadinga ukuphatheka kunhlelo lezi lona ibandla leZanu PF kuyilo elibusayo eliqhuba amacebo okuvuselela inotho yelizwe.
Uthi uhlelo lweZimAsset luyakhuluma ngodaba lokulima lapho abatsha abangaphatheka khona okuzabapha umsebenzi kuphinde kuvuselele amankampani akoBulawayo, inengi lawo ebelivele ligxile ekulimeni utshinda lokulungisa amalembu asetshenziswa kutextile industry.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, uMnumzana Celani Ndlovu, uthi lanxa eminyakeni edluleyo ibandla leZanu PF liveze ukungathembeki, iminyaka le kusiyafika u2018, lithuba lentsha ukuthi iphatheke kunhlelo lezi labo bathole usizo ngoba bangahlala phezu kwezandla inhlelo lezi zizaqhutshwa bona basale bengabambanga lutho abanye besebenzisa inotho yelizwe bodwa.
Act 3// Ndlovu
Text// Umhlangano lo ububizwe yinhlanganiso yabatsha ngaphansi kohlelo lwayo lweYouth Political Forum.
Kusenjalo, inhlanganiso ekhangela ukusebenza kwamankampani, iConfederation of Zimbabwe Industries ithi isibize umhlangano weziphathamandla zayo ukuthi zizokhulumisana ngamankampani aqhubeka elokhu evala abantu belahlekelwa yimisebenzi kungakhanyi ukuthi inhlelo zeZimAsset, iDIMAF yeminyaka emibili esanda kudlula kanye lemizamo yokuthi lelidolobho lenziwe iEconomic Disaster Zone ziletha nguquko bani.